बिहेपछि महिला र डिर्भोस पछि पुरुष किन मोटाउछन् ? यस्तो छ कारण !
समभाव बिहिबार, वैशाख २, २०७८
एजेन्सी २ बैशाख । सामान्यतया कुनै पनि महिलाहरु विहेपछि मोटाउछन् । पुरुषहरु कुनै स्लिम केटी मन पारेर विहे गर्ने फैसला गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कुरामा सम्झौता गर्नैपर्छ । त्यो के हो भने तपाइँले मन पारेकी स्लिम केटी विहेपछि पनि पहिले जस्तै स्लिम रहन्छ भन्ने पक्का हुँदैन । त्यसैले बिहे पहिला स्लिम बिहेपछि मोटाएको खण्डमा पनि उस्तै माया गर्ने बाचा गरेर लगनगाँठो कस्नु उपयुक्त हुनेछ ।
अमेरिकाको ओहायो विश्वविद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानले विहेपछि महिलाहरु मोटाउने र सम्बन्ध विच्छेदप्रति पुरुषहरु मोटाउने तथ्य पत्ता लगाको हो । महिलाहरुले विहेपछि आफ्ना पतिको घर वा कर्मघरका मान्छेहरुको बढि सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण उनीहरुले आफ्नो शरीरको तन्दुरुस्तीको लागि समय दिन पाउँदैनन् । बिहेपछि महिलाहरु बढि आत्मविश्वासी बन्ने र आफ्नो जिउडाल र सुन्दरताको मामिलालाई कम मात्र महत्व दिने गरेकाले पनि शरिर मोटाउँदै जाने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् ।
अध्ययनकर्ताहरुले पुरुषहरु भने विहेपछि दुब्लाउने र डिभोर्सपछि मोटाउने गरेको तथ्य पत्ता लागेको बताएका छन् । विहेपछि पुरुषहरुले मानसिक मात्र होइन शारीरिक रुपमै बढि उर्जा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा बिहेपछि पुरुषहरु आफ्नो तन्दुरुस्तीको मामिलामा समेत महिलाको भर पर्छन् । त्यसैले जब डिभोर्स पछि उनीहरु एक्ला हुन्छन् त्यतिबेला उनीहरुलाई व्यायाम गर्ने होस् हुँदैन र मोटाउने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, वैशाख २, २०७८, २१:१४:००